Cookies Siyaasadda | AIRTOX
Taariikhda ugu dambeysa 28.09.2018
AIRTOX® Industries A/S ("Annaga", "annaga", ama "our") adeegsanaya cookies on airtox.com.
Our Cookies Siyaasaddu waxay sharraxaysaa waxa cookies waa, sida aan u isticmaalno cookies, sida qaybaha saddexaad ee aan la noolaan karno ayaa laga yaabaa inaan isticmaalno cookies Adeegga, xulashooyinkaaga ku saabsan cookies iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cookies.
Sidee AIRTOX® Industries A/S isticmaalka cookies?
Markaad isticmaaleyso iyo marin u heleyso AIRTOX websaydhka, waxaan ku dhejin karnaa tiro cookies feylasha biraawsarkaaga.
Waxaan isticmaalnaa cookies si kor loogu qaado khibradaada. Markaad sii waddo booqashada boggan waad ku raacsan tahay arrintaas, si kastaba ha noqotee waad beddeli kartaa nidaamka cookie-ka waqti kasta.
Cookies waa faylal qoraaleed yar-yar oo loo adeegsan karo websaydhada si ay uga dhigaan waayo-aragnimada isticmaale karti badan. Sharciga ayaa sheegaya inaan kaydin karno cookies Qalabkaaga haddii ay si adag ugu baahan yihiin hawlgalkan boggan. Dhammaan noocyada kale ee cookies waxaan u baahan nahay ogolaanshahaaga.
Bartan ayaa adeegsata noocyo kala duwan oo ah cookies. Qaarkood cookies waxaa meeleeya adeegyada qolo saddexaad ee ka muuqda bogaggayada. Waqti kasta ayaad beddeli kartaa ama ka noqon kartaa oggolaanshahaaga Bayaanka Kukiyada ee websaydhkeena. Baro waxbadan oo ku saabsan cidda aan nahay, sida aad noola soo xiriiri karto iyo sida aan uga baaraandegno xogta shaqsiyeed annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waa maxay xulashooyinkaaga ku saabsan cookies?
Hadaad jeceshahay inaad tirtirto cookies ama ku amro biraawsarkaaga shabakadda inuu tirtiro ama diido cookies, fadlan booqo bogagga caawimaadda biraawsarkaaga bogga. Fadlan la soco, si kastaba ha noqotee, haddii aad tirtirto cookies ama diido inaad aqbasho iyaga, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad isticmaasho dhamaan astaamaha aan soo bandhigno, waxaa suuragal ah inaadan awoodin inaad kaydiso waxyaabaha aad doorbidayso, iyo bogaggayada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan sifiican u soo bandhigin. Waad ka hortegi kartaa macluumaadka uu soo saaray buskudka iyo laxiriira isticmaalka boggaaga (oo ay kujirto cinwaankaaga IP-ga) aruurintiisa iyo howsha Google, adoo soo dejinaya isla markaana ku dhejinaya mashiinka gal-gelinta xiriiriye soo socda: http: // qalabka. google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Isbadalada ku yimid Cookies Siyaasadda
Websaydhka iyo ganacsigeenu way is beddali karaan waqti ka waqti. Natiijo ahaan, waqtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noo tahay inaan wax ka beddelno tan Cookies Siyaasada. AIRTOX wuxuu xaq u leeyahay inuu cusboonaysiiyo ama wax ka beddelo tan Cookies Nidaam wakhti kasta iyo waqti ka waqti. Fadlan dib u eeg siyaasadan marmar. Tan Cookies Nidaamka ayaa la cusboonaysiiyay taariikhda kor ku xusan. Isticmaalkaaga joogtada ah ee websaydhka wixii isbeddel ah ama dib u eegis ah tan Cookies Siyaasaddu waxay muujin doontaa heshiiskaaga shuruudaha dib loo eegay Cookies Siyaasada.